Tranonkala 10 ahafahanao manamboatra haingana ny portfolio ary mora | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Famolavolana tranonkala, dia midika hoe, maro
Ho an'ny mpamorona azy io tena zava-dehibe manana portfolio amin'ny Internet miaraka amin'ny asan'izy ireo raha misy ny mety mpanjifa afaka mahita ny asantsika ary afaka mifandray aminay, manakarama anay ary miasa ho azy.
Ny filamatra dia ny fananana ny tranokalan'ny anaranay na ny anaran'ny masoivohonay na ny biraon'ny famolavolana ary afaka mampiantrano ny portfolio izahay, fa raha tsy manam-potoana, vola na fahalalana ilaina handrafetana ny portfolio-nao manokana ianao dia misy tranokala am-polony manamora ny asa an'ity asa ity antsika.
1 Ilaina ve ny fananana portfolio?
2 Tranonkala 10 hamoronana portfolio anao maimaimpoana
Ilaina ve ny fananana portfolio?
Niova be ny raharaha rehefa mahazo portfolio izay ahafahantsika mampiseho ny zavakanto ataontsika. Lazainay izany satria noho ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana tsara indrindra sy ny fitaovana maro karazana, ny fanaovana ny portfolio-nao ho haingana, mora ary maimaimpoana dia azo atao amin'ny fomba tena tsotra.
Miresaka ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana izahay satria mamela anay hamorona atiny misy kalitao tsara kokoa, vahaolana ary mampakatra horonan-tsary mihitsy aza. Fa andao hatrehana izany, ary hasehonay anao ny toerana 10 izay azonao atao ataovy ny portfolio-nao ary asehoy ny mpanjifa ary ireo orinasa amin'ny alàlan'ny tsindry bokotra iray amin'ny rohinao.
Tranonkala 10 hamoronana portfolio anao maimaimpoana
Nanomboka tamin'i Behance izahay satria ho an'ny mpanakanto endrika, sary, fanoharana ary bebe kokoa, izy io dia toerana manandanja izay tokony hanaovanao eny na eny. Eo ambanin'ny elo an'ny Adobe izy io, ka raha manana kaonty Creative Cloud ianao dia azonao atao ny mamolavola mivantana amin'ny Photoshop handefasana izany famoronana na tetikasa vaovao izany any Behance ka na ny mpanaraka anao aza dia afaka manaraka ny fizotran'ny asa na andiany iray.
Mila fotoana mba hanananao mpanaraka, fa toy ny amin'ny tambajotram-pifandraisana hafa, tia, manaraka ary mitady ireo izay manaraka anay, dia afaka mandray anjara amin'ny vondron'olona mpanakanto kely isika ao anatin'ny fotoana fohy. Manana izany maimaim-poana amin'ny kaonty Adobe ianao, ka tsy ho mora kokoa. Ny interface dia tonga lafatra ary tena intuitive hamela portfolio mahafinaritra be.
iray hafa amin'ireo toerana tsara indrindra ho an'ireo mpanakanto amin'ny tranonkala Ary eto, ary koa ao amin'ny Behance, afaka mizara tranokala amin'ireo matihanina izahay ary koa amateurs izay manomboka amin'ny fanaovana sary, fanoharana na koa amin'ny doka.
DeviantArt mamela antsika manana portfolio maimaim-poana ary izany dia hitan'ny mpampiasa an-jatony izay an'ity tambajotra ity. Iray amin'ireo izay manana mpampiasa maro an'isa toa ilay teo aloha. Ny endriny dia somary tsy dia kanto loatra ao amin'ny portfolio, saingy toerana tokony hisy izany raha toa ianao ka matotra momba an'io. Raha mahay teny anglisy na fiteny hafa ianao, dia mihatsara hatrany.
Flickr dia nifandray tamin'ny sary foana, ka avelanay ho anareo izay manokan-tena ho an'ity sampana ity. Ny iray amin'ireo potika lehibe indrindra dia ny sary marobe izay azonao ampidirina sy ny fampahalalana ESIF izay miseho isaky ny sary. Izany hoe, azon'izy ireo atao ny mahalala ny ISO ampiasainao, ny haavon'ny fampiratiana ary ireo angona manan-danja rehetra amin'ny sary.
Na dia a tranonkala natokana ho an'ny saryNy sarinao koa dia azo soratana ho kanto na sary, hahafahanao mahita mpanjifa. Saingy hoy aho fa tranokala tsara izy io amin'ny alàlan'ny portfolio.
Iray amin'ireo toerana tsara indrindra hanehoana ny portfolio-nao. Na dia misy karazany maro aza ny sokajy zavakanto, dia eo amin'ny sehatra nomerika nametrahan'ny Dribbble accent izany. Ny olana na sembana fotsiny dia ny fanananao ny habaka hampiakaranao ny zavakantoo mila fanasana ianao. Tsy misy fomba hafa hidirana raha tsy manaraka ny kaonty ao amin'ny Twitter izahay ary manongilan-tsofina amin'ireo fanasana.
Tamin'izany fomba izany no namoronany a fiaraha-monina mizara fanasana ary io no fomba nahatongavany hatreto. Iray amin'ireo vondrom-piarahamonina mpanakanto tsara indrindra amin'ny fanaovana dokambarotra nomerika ary koa ny endrika na sary. Aza adino izany ary miezaha hahazo fanasana. Afaka manontany ny faribolan'ny namanao foana ianao raha mahafantatra olona izy ireo.
Ity vahaolana ity dia tsy iray amin'ireo tsara indrindra, saingy te hanana tranokala an-tserasera izahay raha te hanana izany. aza tsy hita isika raha tsy hoe mamaky ilay boaty isika. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia afaka manangana ny portfolio maimaimpoana isika ary raha hitantsika fa tiantsika ny fijerin'ny sehatra dia afaka miditra amin'ireo drafitra telo miaraka amin'ny Carbonmade isika.
Misy ny $ 8 isam-bolana ho an'ny tetikasa 8, Tetikasa 50 ho an'ny 12, ary efa 18 dolara isam-bolana hananana tetikasa tsy manam-petra. Manondro tetik'asa amin'ny zava-kanto nakarina izy ireo. Ny iray amin'ireo tombony dia manolotra traikefa portfolio tena mahafinaritra izay tsy mila mihinana ny lohantsika isika.
ThemeForest dia a vavahady misy lohahevitra an'arivony ho an'ny CMS samihafa. Anisan'ireny ny WordPress ary ahafahantsika miditra amina lohahevitra natokana ho an'ireo matihanina sy mpanakanto. Izany hoe, ny mitady izay mety, mandoa vola kely indrindra 20-30 euro amin'izany ary hanana lohahevitra vonona hapetraka ao amin'ny WordPress izahay.
Ireo lohahevitra ireo mazàna dia mitondra fampianarana ireo hamela ny tranonkala vonona miaraka amin'ny portfolio ary azontsika atao ny mamela ny ambiny hanamboarana zavatra sasany. Izay nolazaiko teo aloha dia mila mitantana WordPress kely ianao, noho izany rehefa afaka kelikely dia afaka manana tranokala tena matihanina amin'ny url anao ianao, mailaka miasa ary maro hafa. Matetika io dia manome matihanina bebe kokoa an'ity raharaha ity ary ny fahafantarana ny mpanakanto manana url sy mailaka azy manokana dia manome akony bebe kokoa an'ireo fifanarahana mety tonga amintsika.
Ity vahaolana ity tena mahaliana satria maimaim-poana. Izy io dia miaraka amin'ny safidy amin'ny fampidirana galeriana sary, bilaogy ary koa sehatra iray izay tsy maintsy nifanarahanay tamin'ny fampiantranoana taloha. Mora izy ireo, ka avelany handeha amin'ny fametrahana WordPress izahay ary manana url miaraka amin'ireo mailakao sy ny hafa.
Ity sehatra ity dia hikarakara ny ambiny, izay avy amin'ny mpampanonta tranokala mamela anao hamorona portfolio matihanina miaraka amin'ny asa kely noho ireo vahaolana roa voalaza etsy ambony. Afaka mahita ohatra amin'ny tranokala tena vita tsara ianao. Ary mamporisika anao hanao fifanarahana amina mailaka ianao mba hitondranao azy amin'ny sehatra hafa. Tranonkala mahaliana izay tsy azontsika lazaina hoe tsia raha mitady portfolio maimaimpoana isika. na dia amin'ny url azonao atao ny manampy anay hiala amin'ny olana ary asehoy anay amin'ny Internet fa tsy mandany euro.
Sehatra hafa natokana ho an'ny artista sy famoronana ary ahafahantsika manana ny portfolio-tserasera mora sy maimaimpoana izany. Ny tsara indrindra dia manana drafitra maro izy io izay mety tsara ho an'ny portfolio. Ny maimaim-poana dia misy ny fonenany manokana ary azontsika atao ny manandrana azy izao.
Raha efa maniry ny handeha amin'ny planina 9 euro isam-bolana isika dia hanana sehatra maimaim-poana amin'ny taona voalohany ary tsy misy dokam-barotra. Raha atao teny hafa, dia hanana portfolio maimaim-poana ianao, fa tadidio fa hahita doka ianao. Ary raha izany dia mety hanaloka ny zavatra niainan'io mpanjifa io izay hahita anao hankafy ny zavakantoo. Mihemotra foana ny dokam-barotra.
Namonjy an'i Etsy izahay noho ny antony iray, satria tranokala tonga lafatra izy io ho portfolio ho an'ireo izay mivarotra zavatra, asa-tanana na fanaovana pirinty ny kantonao mihitsy aza. Ny kaontinao maimaimpoana dia ahafahantsika mampakatra an'io zavakanto tsy maintsy amidinay io. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila mametraka vidiny amin'ny fananantsika isika. Azo averina averina izany, fa raha te hanao satroka tsy manam-paharoa amin'ny volavolanao ianao dia tsy misy toerana tsara kokoa noho Etsy hanehoana ny kantonao ka amidio azy.
Raha mitantana anglisy ianao dia afaka mankany isaky ny vazan'ity planeta ity misy Internet. Ary raha manao sary hosodoko ianao dia afaka mahatratra mpanjifa marobe izay mitady sary hosodoko hafa miaraka amina endrika manokana ho an'ny tranony. Mety ho ianao izany, noho izany dia efa tsy azonao atao ny mametraka ny kantoo amin'i Etsy, asio marika ary manam-paharetana hahafantatra ny hafa hiresaka momba ny zavakantoo.
Tambajotra sosialy ny Instagram, eny. SAINGY azontsika atao ny mampiasa azy ho portfolio ary amin'izany dia mahatratra olona an-jatony maro. Raha ny marina, ny Instagram dia mega ampiasain'ny artista an'arivony. Nametraka ny mombamomba azy ireo izy ireo, ny sarin'ny sary famantarana avy eo ary avy eo dia natao mba hampisehoana ny sary, sary. Na ankehitriny aza dia azo ampiasaina ho fivarotana an-tserasera hivarotra. Ho an'ny inri bebe kokoa, azonao atao ny mametraka carousel sary hanehoana ny fivoarana sy ny famoronana. Andao, fotoana tsara iray hafa hametrahana ny portfolio-nao sy hahatratra ny maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Tranonkala 10 ahafahanao manamboatra haingana sy mora ary maimaimpoana ny portfolio-nao
Olivia R. Orduna dia hoy izy:
Salama, sendra mahafantatra ve ianao na manana tutorial momba ny WordPress? Nilaza izy ireo fa tena tsara, mora ary mora vidy, saingy satria tsy php na css no ahy dia ataoko sarotra be: / arahaba, bilaogy mahafinaritra.
Valiny tamin'i Olivia R. Orduña
erysis dia hoy izy:
Salama, manao ahoana ianao?, Ny portfolio dia azo ampiasaina hamoahana sary nataon-tanana na tsia?
Mamaly an'i erisi
Salama ahoana no fahitanao na fanaovana portfolio dia mora be
Mamaly an'i marisol
Salama, manao ahoana ianao? Mora ny manao portfolio amin'ny inona?
Ny tranonkalanao ara-toekarena dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara! Efa nampidiriko ny portfolio-ko amin'ny ankamaroan'ireo toro-hevitra omenao anay ireo. Tena ankasitrahako ny fotoana nandanianao ny fikarohana ireo tranonkala ireo ary hitadiavana lahatsoratra bebe kokoa. Miarahaba anao amin'ny bilaogy, mahafinaritra izany! Fiarahabana avy any Mexico
Valio ny tranonkalanao ara-toekarena